» राजु केसी र डिला विक बाहिरिँदा दर्शकहरु आक्रोशित
राजु केसी र डिला विक बाहिरिँदा दर्शकहरु आक्रोशित
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार १४:१८
मकवानपुर, १२ असोज । चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ का चर्चित प्रतियोगीहरु राजु केसी र डिला बिक क्वाटरफाईनलबाट बाहिरिएपछि दर्शकहरु आक्रोशित र दुःखी भएका छन् । दर्शकहरुका साथै शोमा भिडिरहेकाहरुले समेत दोहोरी च्याम्पियनको विजेताका दाबेदार मानेका राजु र डिला बाहिरिएपछि दर्शकहरु आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरुले भोटको अभावमा हार व्यहोर्नु परेको र राम्रो कलाकार बाहिरिएको भन्दै दर्शकहरुले भोटिङ सिस्टमको पनि खुलेर विरोध गरेका छन् । दर्शकहरुले भोटिङ सिस्टमकै कारण यसअघि नै नेपाली रियालिटी शोहरु मनपर्न छोडेको बताउँदै आएका छन् । शनिबार शोका अर्का चर्चित प्रतियोगीहरु राजेन्द्र पाठक र मिना नेपाल सेमिफाईनलमा प्रवेश गरेसँगै राजु र डिला दुःखी हुँदै शोबाट बाहिरिएका थिए ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् राजु केसी र डिला बिक । उनीहरुले उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्रीसँग दोहोरी भिडेका थिए । यो दोहोरी भिडन्तमा राजुलाई निर्णायक रमेश बिजी र चन्द्र शर्माले फाईभ–फाईभ स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै उनलाई निर्णायक प्रजापति पराजुलीले फो स्टार र सिता थापाले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । डिलालाई निर्णायक चन्द्र शर्माले फो स्टार र अन्य निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा निर्णायकहरुबाट ५८४.५ अंक प्राप्त गर्दै १६.५ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । यो उत्कृष्ट २४ को क्रममा सर्वाधिक बढी अंकका आधारमा हारजित भएको दोहोरी भिडन्त थियो । दोहोरीकी रानी पनि भनेर चिनिएकी डिलाको माईती सुर्खेतमा पर्छ । उनी हाल धादिङमा बसोबास गर्छिन् । उनी लोकदोहोरीकी परिचित गायिका समेत हुन् । लाईभ दोहोरीमा पनि उनको निक्कै चर्चा छ ।
सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगर ११ सुब्बाकुनामा जन्मिएकी डिलाले दोहोरी गायनको क्षेत्रमा संघर्ष गरेरै नाम कमाएकी छिन् । मेलामहोत्सवमा गीत गाउन जाँदा भाडा समेत नहुने समस्याबाट गुज्रिएर अहिले उनी सबैको प्रिय गायिका बन्न सफल भएकी छिन् । गायनसँगै अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिने उदेश्यले भैरहवामा पुगेकी डिलाले संघर्षकै यात्रा गरेर पोखरामा पाईला टेकिन् । पोखराहुँदै उनी गायनमै संघर्ष गर्न वि.सं. २०७१ सालमा काठमाडौँमा पुगेकी थिईन् । उनी दोहोरी गाउने ईच्छाकै बिच सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा उनी अनवरत संघर्ष गर्दै दोहोरी क्षेत्रमा अगाडि बढेकी छिन् ।
डिलासँगै जोडी बाँधेर दोहोरी च्याम्पियनमा भिडेका चर्चित गायक हुन् राजु केसी । विभिन्न दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा समेत जित हासिल गरिसकेका राजु स्याङ्जाका हुन् । उनी लाईभ दोहोरीमा पनि निक्कै चर्चामा छन् । स्याङ्जा जिल्लाको हरिनाश गाउँपालिकामा जन्मिएका राजु हाल वालिङ नगरपालिकामा बसोबास गर्छन् । सानैदेखि लोकदोहोरीमा रुचि राख्दै लोकदोहोरी गाउँदै अघि बढेका राजुले वि.सं. २०६५ देखि औपचारिक रुपमा दोहोरी गायन रोजेका हुन् । उनका विभिन्न गीतहरु पनि चर्चामा छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–